Iincwadi ezigqibeleleyo eIndiya | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezilungileyo ngeIndiya
UAlberto Legs | | Iincwadi, Inoveli, Ezahlukeneyo
I-Indiya lilizwe elinobunzima, elinamavumba amatsha kunye nemibala, apho sonke sasikade sifuna ukuphulukana nathi okanye, ubuncinci, ukuze sikwazi ukujonga kwi-kaleidoscope ethile. Inketho eba nokwenzeka ngakumbi xa isiza ekuhambeni kwezi ezona ncwadi zilungileyo malunga neIndiya ehlalutya ubuso obahlukileyo bezinye zezinye izizwe ezizodwa kwihlabathi.
1 Iincwadi ezilungileyo ngeIndiya
1.2 USwami nabahlobo bakhe nguRK Narayan
1.3 I-Indiya: Emva kwesigidi soQhushululu, ngu-VS Naipaul
1.4 Oonyana bobusuku bobusuku, nguSalman Rushdie
1.5 Ibhalansi egqibeleleyo, nguRohinton Mistry
1.6 UThixo wezinto ezincinci, nguArundhati Roy
1.7 Igqala laBasetyhini, ngu-Anita Nair
1.8 Igama elilungileyo, nguJhumpa Lahiri
1.9 I-Tiger emhlophe, ngu-Aravind Adiga
URamayana uya eIndiya ukuba yintoni iOdyssey kuncwadi lwaseNtshona: isiseko soncwadi esisekwe kwinkcubeko nakwindlela yaso yokuqonda. Ipapashwe ngaxa lithile ngenkulungwane ye-XNUMX BC yimbongi Vālmīki, Ramayana (okanye uhambo lukaRama) ngu indumasi exelela ibali leNkosana uRama kunye nokuzonwabisa kwakhe kwisiqithi saseLanka ukuze asindise uSita wakhe othandekayo kwi-Ravana. Isizathu esifanelekileyo sokudlulisa iimfundiso zenkcubeko yeSanskrit Okuya kuhlala ixesha kunye nobugcisa kungekuphela eIndiya, kodwa nakwamazwe akumazantsi mpuma eAsia boyisa ngekhulu lesibhozo.
USwami nabahlobo bakhe nguRK Narayan
EIndiya, yi "swami" kuthetha ukuzikhusela, ngokubanzi njengeyoga esondela ekuzaleni komntwana. USwami nabahlobo bakhe, Ibali lokuqala likaGraham Greene elixhaswe ngumbhali uNarayan "Malgudi" amabali, alizange libe linye indiya yokuqala isebenza ngesiNgesi egqithe ngaphaya kwemida, kodwa nakwimifanekiso elishumi yama-30 eIndiya ephawulwe ngumbutho wenkululeko owawusondela kwiintsuku zawo zokugqibela. Okwangoku, iingcali ezininzi zizama ukufumana indawo iMalgudi, idolophu eyintsomi eMzantsi India.
I-Indiya: Emva kwesigidi soQhushululu, ngu-VS Naipaul
Ngaphandle kokuma kwayo kwiCaribbean, iziqithi ze ETrinidad naseTobago Yenza elinye lamazwe anabemi abaninzi baseIndiya emhlabeni. Iziphumo ze-diaspora ezathi uNaipaul, wemvelaphi yamaHindu, wazi kakuhle de kwaba lixesha lokugqiba kwakhe ukubuyela e-India phinda ufumane isazisi sakho. Kuwo onke amaphepha ale ncwadi, uNaipaul uchaza ilizwe lookhokho bakhe ngokurhabaxa nangokuthantamisa, ngokukhohlisa komntu ohamba ngolwandle kwindawo eyahluke mpela kunangaphambili. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeencwadi ezilungileyo zaseIndiya.
Ngaba ungathanda ukufunda I-Indiya, ngu-VS Naipaul?
Oonyana bobusuku bobusuku, nguSalman Rushdie
Uthathelwe ingqalelo njengomnye wemizekelo ebalaseleyo ye- ubunyani bomlingo "Yenziwe eIndiya", Abantwana bobusuku yayingumsebenzi owawudityaniswa nguSalman Rushdie owayengaziwa ngeloxesha ekhomba kwelinye ezona ziqendu zibalulekileyo kwimbali ye-India: ezinzulwini zobusuku ngo-Agasti 15, 1947, ngelo xesha ilizwe laseAsia lafumana inkululeko. Isiqendu apho ukuzalwa kukaSaleem iSinayi kwenzeka khona, umntu ophambili onamandla angaphezu kwendalo owaguqula lo msebenzi wapapashwa ngo-1981 waba ophumelele ibhaso leNcwadi okanye iJames Tait Black Memorial Prize.
Ibhalansi egqibeleleyo, nguRohinton Mistry
Uzalelwe eBombay kusapho lakwaParsi, uMistry wafudukela eKhanada kunye nenkosikazi yakhe ngo1975 apho aqala khona ukupapasha uthotho lwamabali azakunxibelelana nokupapashwa Ibhalansi efanelekileyo Inoveli inzima njengoko injalo, isethwe kwisixeko saseIndiya ngexesha lokubhengezwa kwemeko yonxunguphalo, isizathu esikhokelela abalinganiswa abane abangaziwa omnye komnye ukuhlala ndawonye kwigumbi elincinci. Inoveli yayi Utyunjelwe ibhaso lokubhukisha, waphumelela iTrillium Award kwaye wabandakanywa kwi Iklabhu yeNcwadi yeOprah ngo-2001, eyakhokelela ekubeni kuthengiswe amakhulu eekopi.
UThixo wezinto ezincinci, nguArundhati Roy
Uzalelwe kusapho lwamaSyria-lamaKristu ahlala kweleenjiko IKerala, ilizwe laseMzantsi India, UArundhati Roy uthathe phantse ubomi bakhe bonke ukubhala le noveli ngobomi bakhe iinkcazo zayo ezenza ukuba ibe ngumsebenzi owahlukileyo, okhethekileyo. Ibali, elibekwe ngo-1992 no-1963, lixelela ubuntwana kunye neentlanganiso ezilandelayo zikaRahel no-Estha, amawele amabini imanyene yimfihlo eyoyikekayo. Emva kokupapashwa kwayo ngo-1997, Uthixo wezinto ezincinci yaba othengisa kakhulu kwaye uphumelele ibhaso leNcwadi.
Igqala laBasetyhini, ngu-Anita Nair
Imeko yabasetyhini eIndiya Kukhe kwenzeka iinguqu ezininzi, kodwa isagcina intsalela ekrakra. Isizathu esibhekiswa nguNair kuwo onke amaphepha ale noveli, ophambili, u-Akhila, ngumfazi ongatshatanga oneminyaka ephakathi ogqiba ukuthatha uhambo ngololiwe apho adibana nabanye abahambi ababhinqileyo abahlanu abakhuthazayo. Abasetyhini abanama-irascible, submissies and feisty husband that do a microcosm full of warming and reflection.
Ungaphoswa Igqala laBasetyhini, ngu-Anita Nair.
Igama elilungileyo, nguJhumpa Lahiri
Umbhali webali elifutshane ngaphambi kokuba umbhali wenoveli agwebe ngempumelelo kunye nomgangatho wemisebenzi enje Umhlaba ongaqhelekanga, Umbhali waseBengali-waseMelika uJhumpa Lahiri wothusa umhlaba lipapashwe ngo-2003 inoveli yakhe yokuqala, Igama elilungileyo. Ibali elintsonkothileyo elilandela emanyathelweni omtshato waseIndiya wokuzinza eCambridge. Emva kokuzalwa komntwana wakhe wokuqala, igama likhethwa ukuba libe ngumzekelo ogqibeleleyo phakathi kwesiko (kufuneka umakhulu alikhethe) kunye nexesha langoku abanokuziqhelanisa nalo. Incwadana yaguqulwa ngo-2006 kwi-cinema.
I-Tiger emhlophe, ngu-Aravind Adiga
Ngehashe phakathi kwenoveli ye-picaresque kunye ne-epistolary,Ingwe emhlophe Kubaliswa ngee-imeyile ezahlukeneyo ezithunyelwa yindoda kwi-Nkulumbuso yase China. Le ndoda ibizwa ngokuba nguBalram Halwai, kwaye wayeyinkwenkwana evela kwenye yezona ndawo zihlwempuzekileyo eIndiya ukuba asebenze njengomakhoboka wasebukhosini wosapho olusisityebi lwaseNew Delhi. Ukusuka apho, ophambili wethu uyakwazi ukuba ngusomashishini onxanelwe igazi evela kwisixeko sase Bangalore. Incwadi, ebhalwe nguAdiga yajika yaba yiyo Umbhali wesibini omncinci ukuphumelela ibhaso leNcwadi, waba ngoyena mntu wathengisa kakhulu kupapasho lwayo ngo-2008.
Zeziphi ezona ncwadi zibalaseleyo eIndiya ozifundileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezilungileyo ngeIndiya
UViolet Anderson sitsho
Inoveli ebambekayo malunga ne-India U-ASHES KU-GODAVARI RIVER (eAmazon) Iqukethe i-adventure, iindawo ezingaqhelekanga, ubuqili, imfihlakalo, ukuhamba, kunye nothando, kwaye ibhalwe kakuhle kwizihloko ezinje ngesati, imitshato elungiselelwe, kunye nokujongwa kwabahlolokazi.
Phendula u-Violeta Anderson
URosalyn Perez sitsho
Kwaye enye inoveli enkulu echaza amasiko amaHindu ngokucacileyo kunye nobuhle ibizwa ngokuba yiLas Torres del Silencio, (Amazon)
Phendula URosalyn Perez
URosa Perez sitsho
ITowers of Silence yenye yenoveli enomdla ebhaliweyo malunga neIndiya kunye namasiko ayo angaqhelekanga, afumaneka kwiAmazon.
Phendula kuRosa Perez
Ngokwenene uthuthu kuMlambo iGodavari kunye neTowers of Silence ziincwadana ezinkulu ezibekwe eIndiya, ngumbhali omnye (uLourdes María Monert) kodwa zinokufundwa zodwa kuba aziyiyo isaga kodwa zizimele zodwa.
UIsabel Garcia Moreno sitsho
Ndisandula ukufunda inoveli ebizwa ngokuba yi-Adventure e-India kwaye ndibonile ukuba ngumbhali ogama linguCarmen Pérez Calera kwaye usayina ngegama elingelolakhe "siestecita." Ndiyithandile kakhulu, iyonwabisa kakhulu kwaye ndiyifumene inoveli ye-adventure ehlekisayo. Ngoku isimahla kwiAmazon.
Phendula uIsabel García Moreno
yenzayo Iiveki ze2
Ndiyakholelwa ukuba ukuphoswa kolu luhlu yenye yezona ncwadi zimnandi nezibalaseleyo kwakha zabhalwa malunga neIndiya, "Umdlalo Olungileyo" nguVikram Seth, othathwa ngabagxeki abakhethekileyo njengoyena mntu ubalaseleyo waseIndiya wokwenyani.
Izihloko ezi-5 ezimnyama kwinyanga yesihlanu. Hill, Manzini, Mola, Silva kunye neSwanson
URafael Sabatini, iminyaka eli-143 yenoveli enkulu ye-adventure